Hibboo ajjeechaa hojjettoota warshaa Daangootee - BBC News Afaan Oromoo
Hibboo ajjeechaa hojjettoota warshaa Daangootee
17 Caamsa 2018
Goodayyaa suuraa Reenfa Diippii fi konkolaachisaa isaanii akkasumas konkolaataa ittiin imalaa turan
Hogganaa warshaa simintoo Daangootee dabalatee hojjettoonni warshichaa sadi Roobii darbe haleellaa namoota hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamneen lubbuun isaanii darbeera.
Mootummaan Itoophiyaaa ajjechaa raawwatame kanaan gadda guddaa itti dhagaahame ibsee, dhimmicha qorataa akka jiru beeksisee jira.
Warshichi rakkoo hojjettoota isaa waliinis ta'e, hawaasa naanichaa waliin qabu mariin furee ture jedhu hojjeettonni warshichaafi jiraattonni naannichaa.
Hogganaan dhaabbatichaa Obbo Diip Kamaaraa rakkoolee hojjettootaafi bulchiinsa warshichaa gidduu ture mariin furanii turani jedhu ittigaafatamaa wal-qunnamtii hawaasaa warshichaa kan ta'an Obbo Tasfaahun Derresenyi.
"Torbaan muraasaaf hojii dhaabee kan ture dameen geejjiba warshichaas waliigaltee uumameen eegalee ture," jedhu.
Gama kaaniin waldhabdee jiraattota naannichaa waliin warshichi qabu furuuf marii hawaasaa naannoo waliin taasifameen hogganaan warshichaa sirna 'harma hodhaatiin' hawaasa naannootti makamuufi moggaasa maqaa Galataa jedhu argachuu jaarsi biyyaa naannichaa obbo Girmaa Taaddasaa BBC'tti himaniiru.
Rakkoon hojjettootaafi hawaasa naannoo waliin warshichi qabu furamuun isaa ajjeechaa kana hibboo nutti taasisee jedhu.
Roobii gara galagalaa warshaa simintoo Daangootee irraa gara mana jireenyaa isaanii Finfinnee jirutti otoo imalanii ture dhukaasa banameen hogganicha dabalatee barreessituu fi konkolaachisaan isaanii kan ajjeefaman.
Namooti ijaan argan akka dubbatanitti konkolaataa toyoottaa raavaa foor ittin deemaa turan biratti qalahaawwan 17 tahan aragamaniiru.
Hogganaan waajjira Ministira Muummee Itoophiyaa Obbo Fitsuum Araggaa, Ministira Muummee dabalatee gadda guddaa mootummaatti dhagaahame ibsuun, qorannoon dhimmicha irratti eegalamuu isaa fuula tiwiitarii isaanii irratti eeranii jiru.
Haleellaan itti gaafatamaa Warshaa Simintoo Daangotee irratti fi lammiilee Itiyoophiyaa irra gahe lafa Gaattiraa jedhamee waamamutti yoo tahu namoota kana ajjeesuuf yoo xiqqaate qawween si'a 15 dhukaafameera jechuun Itti gaafatamaan waajira DH.D.U.O Aanaa Ada'aa Bargaa Obbo Diriirsaa Taaddasaan BBC'tti dubbataniiru.
"Konkolaachistoonni warshichaa waldhabdee bulchiinsa waliin qabaniin baatiiwwan darbaniif hojii irra hin turre. Ejensiiwwaan warshicha wajjin hojjetanii illee wal dhabdeen baramaa tahe akka jiru ni beekna,''jedhu. Mormii waggoota darban Oromiyaa keessa tureen konkolaataawwanii fi maashinoota warshichaa irratti haleellaan gahe ture.
Warshaa Simintoo Daangootee waggaa tokkoofi walakkaa kan bulchan Diippii Kaamaar hawaasa naannichaa biratti fudhatamaa argataa akka turan hojjetaan warshichaa nutti himaniiru.